BASKET-BALL «CCOOI 2018» :: Hiady farany ny anaram-boninahitra ny Cospn sy Premium Cobra • AoRaha
BASKET-BALL «CCOOI 2018» Hiady farany ny anaram-boninahitra ny Cospn sy Premium Cobra
Miendrika lalao famaranana eo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika Faritra fahafito, taranja basket-ball, ny fihaonana farany eo amin’ny Cospn Mada- gasikara sy ny Premium Cobras avy any Seychelles, anio any Seychelles. Fandresena efatra sy faha-resena tokana no vokatra azon’ny ekipan’ny Pôlisim-pirenena malagasy, hatramin’ izao.
Teo amin’ny lalao miverina dia niondrika teo anatrehan’ny Cospn, tamin’ny isa 90 noho 65, ny alahady lasa teo ny ekipan’ny Beauvallon Heat, avy any Seychelles. Resin’izy ireo, tamin’ny isa 89 noho 47, ihany koa ny ekipan’ny Mahebourg Flippers avy any Maorisy, omaly.
Fandresena dimy kosa no azon’ny Premium Cobras tamin’ireo lalao dimy efa vitany, hatramin’ ny omaly. Tamin’ny lalao mandroso nihaonan’ity farany tamin’ny Cospn dia elanelan’isa tokana (67 – 66) no nandresen’ny mpampiantrano azy ireo. Mila mitady fandresena izany ny ekipan’ny Cospn, raha te hisolo tena ny faritra fahafito amin’ny fifaninanana kaontinantaly amin’ny taona ho avy na ny “Afroligue 2019”.
HAZAKAZA-PIARAKODIA – SLALOM :: Tompondakan’i Madagasikara i Tsiory, laharana faharoa i Mika